Nyochaa onye njikwa FC30 Pro maka gam akporo | Androidsis
8Bitdo bụ ụlọ ọrụ China nke nwere ọkachamara n'ịmepụta ndị na-achịkwa ụdị njikwa. N'oge ahụ anyị mere nyocha nke ọmarịcha NES30, a njikwa na kpọmkwem otu ihe ahụ gwụchara ukara njikwa nke Nintendo mbụ desktọọpụ njikwa. Ugbu a bụ oge nke FC30Pro, mbipụta vitaminized nke pụtara maka bọtịnụ analog ya abụọ nke ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla na ekwentị gam akporo gị. Ọ bụrụ na ị bụ mgbọrọgwụ.
Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na FC30 Pro dị mfe iji hazie igwu egwu egwuregwu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi onye njikwa ahụ iji rụọ ọrụ ọ bụla egwuregwu nwere njikwa njikwa, ị ga-enwerịrị ikikere mgbọrọgwụ na ọnụ gị. Agbanyeghi na aghaghi ido anya nke oma banyere otu ihe: Ezubere onye njikwa FC30 Pro ka ị nwee obi uto egwuregwu ọ bụghị ka ị gbawaa isi na Mgba Ọgbara Ọgụgụ 5. Maka nke ahụ, jiri onye njikwa ọzọ ma ghara ihiechi bọtịnụ nke ọla a maka ndị hụrụ egwuregwu egwuregwu.
1 FC30 Pro, ihe okike mara nma nke gha acho obi ndi huru retro n'anya
2 FC30 Pro, njikwa njikwa na mfe ịhazi
3 Na-egwu egwu na onye njikwa FC30 Pro, ahụmịhe mara mma
3.1 Zụrụ FC30 Pro njikwa
FC30 Pro, ihe okike mara nma nke gha acho obi ndi huru retro n'anya
M ga-amalite nke a FC30 Pro nyocha na-ekwu maka mmecha ya. Na akụkụ a, enwere m ike ito uru nke ngwaọrụ ejiri ịhụnanya na nlekọta wuru nke na-eme ka njikwa ime ihe a bụrụ ihe pụrụ iche. Iji malite, ndị hụrụ ochie consoles ga-achọpụta na agba ahụ na-ezo aka n'ụzọ doro anya ụda nke bụ akụkụ nke njikwa mbụ nke otu njikwa ndị Japan.
Banyere imewe anyị pụrụ ịhụ na FC30 Pro na-eweta ihe kachasị mma nke nnukwu njikwa abụọ nke 80 na 90s, na-emeziwanye emezighị emezi ha. Iji malite, anyị na-ahụ na ahịrị ya dị ka nke njikwa akara njikwa desktọọpụ nke abụọ nke nnukwu N, yana njirimara ndị ahụ gbara gburugburu na nhazi nke bọtịnụ ABXY. N'aka nke ọzọ, ọ na-eji njirimara ahụ ojii na isi awọ ya na bọtịnụ ọbara ọbara na njikwa nke njikwa mbụ nke ụlọ ọrụ Japan.
Na mgbakwunye inwe ezigbo mma mara mma ihe owuwu nke FC30 Pro bu ezigbo ihe. Mmetụta aka nke onye njikwa ahụ dị ezigbo mma, nke yiri nke Super Nintendo njikwa.
FC30 Pro, njikwa njikwa na mfe ịhazi
Nha ya zuru oke ọ bụ ezie na mbụ ọ na-esiri ike ijide ya ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu aka, mana imeru gi aru. Can nwere ike ịgwa na ebe ntanetị dị njikere ịga ebe ọ bụla. N'ezie, FC30 Pro nwere ntụpọ: a na-egosipụta akara ihu n'ihu tupu esemokwu ọ bụla ka oge na-aga ị ga-enwe iwu ahụ na njakịrị na-adịghị mma, ihe ọjọọ iji banye na akaụntụ.
na bọtịnụ na-n'ụzọ zuru oke na ahaziri; Ọ nwere ihe abụọ analog ana-ekpo ọkụ, na mgbakwunye na isi obe. N'aka nke ọzọ anyị na-ahụ mmalite na họrọ bọtịnụ, na mgbakwunye na bọtịnụ A, X, B, Y a maara nke ọma nke na-egosipụta njikwa Nintendo.
Na elu onu anyị na-ahụ L1 / R1 na L2 / R2 bọtịnụ tinyekwara ọdụ microusb iji kwụnye ihe njikwa. Mgbe ọ na-akwụ ụgwọ, ọkụ ya dị na ala, n'ụzọ doro anya banyere Castelvania na mma agha Crissaegrim a maara nke ọma na-acha anụnụ anụnụ, ọkụ na-egosi ụgwọ ahụ.
N'ikpeazụ, na ọnụ ala enwere obere bọtịnụ abụọ iji gbanye FC30 Pro njikwa na bọtịnụ nrụpụta nke ga-ahọrọ ịhọrọ ọnọdụ njikwa dabere na egwuregwu anyị chọrọ igwu.
Mkpọchi ndị isiike na ị pịa iji mee ka ha na-arụ ọrụ, ihe na m na-amasị m, ị gaghị na-atụ uche a button ndudue. Enwere ndị na-ahọrọ bọtịnụ dị nro, mana ịgbaso ndị n'ibu usoro nke njikwa ochie, FC30 Pro na-emezue ozi ya n'ụzọ zuru oke.
FC30 Pro gụnyekwara ihe mgbanaka nke ga-akwado ngwaọrụ anyị ji egwu egwu, n'agbanyeghị na enweghị m mmasị na usoro ya. Nke ịkụ na iwepụ ihe Ahụghị m onye nkpọ aka bara uru ma ọlị.
Ọ bụ ezie na m nwalere ya ruo izu ole na ole ma ọ ka na-adịgide n'ụzọ zuru oke, ọ dị ka ọrụ arụ, mana ọ dị mfe ịchọta nkwado maka ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Na-egwu egwu na onye njikwa FC30 Pro, ahụmịhe mara mma
Ọ dị mma, anyị ahụlarị na onye njikwa FC30 Pro wuru nke ọma ma nwee atụmatụ mara mma nke ukwuu, mana ọ dị mma maka egwuregwu? Azịza ya bụ ee ee. Ọ bụ ezie na dakọtara na ọtụtụ egwuregwu, gụnyere Modern Combat 5, Echere m na ụdị akụkụ a nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu ochie na nke a FC30 Pro karịa ị nweta atụmanya gị.
Ka mmekọrịta na ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ Naanị ị ga-eme ka Bluetooth nke ekwentị ma ọ bụ mbadamba rụọ ọrụ wee jikọọ ebe dị anya. Ọ gaghị adị mfe. Mgbe ahụ ị ga-emepe emulator ma hazie bọtịnụ iji nwee ike ịkụda ndị iro okpu agha.
Agbalịrị m Super Nintendo na Nintendo emulators dị iche iche ahụmịhe abụrụla ihe na-enye afọ ojuju. Mkpọchi ahụ na-aza ngwa ngwa na-enye gị ohere igwu egwu nke ọma. Ahụmahụ dị n'akụkụ a enweghị ike ịka mma.
Mana gịnị kpatara m ji chọọ bọtịnụ analog ma ọ bụrụ na egwuregwu NES na egwuregwu Super NES na-egwuri egwu mgbe niile? Nke a bụ mgbe Ekpebiela m ịnwale emulator Nintendo 64 na Playstation dịka nwatakịrị na-echeta oge ochie.
Ebudatara m M64 emulator na-egwu Nintendo 64 egwuregwu na mbụ nnukwu anya abịawo mgbe m hụrụ na FC30 Pro na-akpaghị aka ahazi maka emulator a. Nsogbu nke Nintendo 64 egwuregwu bụ onye nlekọta Nintendo dị iche, ya na bọtịnụ anọ ndị na-acha odo odo, na mgbakwunye na bọtịnụ A, B.
N'okwu a, FC30 Pro na-ahazi bọtịnụ analog ziri ezi iji rụọ ọrụ dị ka bọtịnụ ndị yiri obe, na-enye ohere a zuru ezu ọrụ ahụmahụ. Nụ egwu egwuregwu kacha mma Nintendo 64 na FC30 Pro bụ ezigbo obi ụtọ.
Na mgbakwunye ọ bụrụ na ị bụ mgbọrọgwụ ị nwere ike hazie onye njikwa iji mara bọtịnụ aka na ihuenyo na egwuregwu ọ bụla, ihe ọzọ e kwesịrị ịtụle. You chọrọ karịa? Onye njikwa FC30 Pro dakọtara na gam akporo, iOS, PC, Wii na Wii U. Ee, ị nwere ike igwu na kọmpụta gị ma ọ bụ na Wii ma ọ bụ Wii U console ya na onye njikwa 8Bitdo ọhụrụ. Oh, na ọ na-enye ohere ka ndị egwuregwu anọ egwu n'otu oge! Ngọzi ARM processor ...
N'ikpeazụ, rịba ama na m na-egwuri egwu karịa awa 3 na-enweghị ebubo onye njikwa ahụ, yabụ ikike nke FC30 Pro karịrị ezuru.
Na nkenke, na FC30 Pro bụ ezigbo njikwa na njikwa mara mma. Ma na-ewere na ndị ọchịchị nkesa nke a na ngwaọrụ, na Hollọ ahịa dị na Chollomedia, nwere ya dị na ezigbo ọnụ ahịa mara mma, 37,50 euroM chere na ọ bụ karịa ezi uche zuo iji na-enwe ọkacha mmasị gị egwuregwu.
Zụrụ FC30 Pro njikwa
Ọmarịcha arụmọrụ na arụmọrụ
Redirịba uru maka ego
Ọdịmma dị elu gwụchara na nzaghachi njikwa ziri ezi
Dị mfe iji mmekọrịta ọ bụla gam akporo ngwaọrụ
The n'ihu ịbịaru wears si ojiji
Onye na-akụ n’olu anaghị aba oke uru
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » FC30 Pro, anyị nyochaa ọhụụ ọhụrụ maka ndị hụrụ retro n'anya
Zaghachi Gaston Duarte
Pepe jụrụ dijo
Kedu maka oge ndụ batrị ahụ, mgbe ọ mebiri emebi n'ihi na ọ bụ Chinese, ọ dị mfe ịnweta ngbanwe?
Zaa ajụjụ Pepe
Facebook Lite mechara banye na Spain iji chekwaa gị megabytes ole na ole na atụmatụ data gị